Umzimba wethu ufuna ntoni xa udonsa kwimveliso ethile?
I-Dietology, ngelishwa, ayikude neengcali ezizodwa: akukho ndlela yokunciphisa ubunzima, obuya kunceda wonke umntu-apho kuya kuba yinto engekho kwimithetho. Ngoko ke, kwimeko nganye, kufuneka wenze iziphakamiso zakho eziqwalasela iimfuno kunye nokuthambekela komntu othile. Ukuba ukhetha ukwakha ukutya kwakho ngokwakho, zama ukungaxhatshazi njengento "yonke into ecocekileyo yonakalisa", "yidla oku kutya ngokuhlukeneyo" - kuqala uqonde oko kusemva kwesi sitatimende. Kuphela ke awuyi kuba yintlungu engabonakaliyo yenye inkolelo, ekhutshelwe ngenyaniso.
Ngokuqhelekileyo, ukulahlekelwa isisindo, okwenzeka kwisiganeko somzimba wakhe, ekugqibeleni sibe isigulane sezinyango zamazinyo. Kuvela ukuba ngesizathu esithile umzimba wabo wawuhlala ucela into ehlukile kunokuba yintoni eyimfuneko. Nangona kunjalo, ingxaki ayikho emzimbeni: ngokuqinisekileyo ibonakalisa ukusilela kwezondlo ezithile, kodwa intombazana eyanciphisa ubunzima ayisoloko ilungile, le miqondiso ishicilelwe.
Ngokuqhelekileyo kwenzeka ukuba indoda ayikho i-amino acid ebalulekileyo. Umzimba kwiimeko ezinjalo uqala ukubonisa "Ndifuna inyama". Ukubona isidingo salokhu, abafazi ngokukhawuleza baya kwivenkile baze bathenge i-sausage: bayaqiniseka ukuba lo mveliso wenyama. Eyona nto imveliso ye-sausage-sausage yeenyama ingaba ngowama-2 ukuya kuma-8%, oko kukuthi, i-100 g ye-sausage iqulethe i-8 grams inyama. Kwaye kukho intetho apha malunga nokuzaliswa kwe-amino acid deficiency?
Ukuthinta iiskese. Ngaba umzimba wethu udinga imfuneko enkulu yemaswidi kunye namaqebelengwane? Kodwa kuthekani ngobuninzi beekhalori eziya kuthi ziba ngamafutha? Isalathisi esinjalo somzimba kufuneka senziwe ngokuchanekileyo: kwiimeko ezininzi umzimba awunayo i-carbohydrates - kuphela elula, equlethwe kwimveliso ye-confectionery, kodwa eyinkimbinkimbi. Isingeniso sexabiso elaneleyo lokutya okusanqiweyo, isinkwa sesinkwa, izityalo, imifuno kunye neziqhamo ekudleni kukunceda ukusombulula ingxaki.
Ngaba ufuna ukuba neprotheni, isikhokelo okanye ipoda? Nantsi kuyimfuneko ukuqhubeka malunga nomzimba ngendlela engafanelekanga, kwaye kufuneka sisebenzele kwivenkile kwimveliso yobisi kunye nesigxina seziyobisi ngezidakamizwa ezine-calcium. Kwaye kwakuba yinto efanelekileyo ukuyenza ukuqesha kunye ne-endocrinologist ukujonga ukuba kukho ukuphulwa kwe-calcium metabolism emzimbeni.
Ukulangazelela ityuwa kunokubonisa ukunyanzeliswa kwe-arterial.
Isidingo sobunzima kunye nomuncu sibonakala kwi-gastritis kunye nokunciphisa ukuthungatha, ukungakwazi ukusebenza kwe-enzyme yokugaya okanye ukunyamezela okungapheliyo. Ikhofi ne-tshokoleta ifaneleka xa i-overfatigue, kunye neentlanzi kunye neentlanzi zasemanzini-ekunqongopheni kwe-iodine. Ngoko umzimba wethu uyazi kakuhle indlela yokunxibelelana ngayo ngeemfuno zabo, kodwa kuphela iimpawu akufanele zithathwe ngokoqobo.
Ukuba umnqweno wokutya i-pokaloronnee - ikhekhe, i-tshokoleta iyenzeka iintsuku ezimbalwa ngaphambi kokuqala kokuya esikhathini, kunengqiqo ukujonga izinga le-hemoglobin. Kodwa kufuneka yenziwe ngaphambi nangemva kokuya esikhathini: ukuba i-hemoglobin iyancinci kumabini omabini (ngaphantsi kwe-115 g / l), ngoko i-anemia ye-iron disability is observed. Kwaye umzimba kufuneka ungadliwayo, kodwa inyama, amaqanda, amakhowe, i-buckwheat kunye nemifino.
I-content ephantsi yeoli, ingcono
Kwiintengiso unokufumana iimveliso zobisi ngamanqanaba ahlukeneyo enamafutha. Ukulahlekelwa isisindo kukhethwe ngabangama-peresenti aphantsi: bawuncedo ngakumbi. Ukususela kwimbono yabo babala iikhalori, ngoko kunjalo, kodwa kwimbono yesondlo sokutya, le yintsomi yangempela. Inyaniso yokuba iimveliso zobisi ziyimvelaphi ebaluleke kakhulu ekungenakuthola kuphela kwiprotheni yomzimba, eyona nto ibaluleke kakhulu, kodwa i-calcium.
Kwaye le mineral ingcono ekuxhaseni phambi kwamafutha. Iimveliso zobisi "Zero" azikwazi ukuba yimithombo yecalcium. Sifanele sijonge ukulungelelanisa: umxholo we-fat (i-milk, kefir, yogurt) kufuneka ube ngu-1.5%, kunye ne-cottage cheese kunye noshizi we-grained-4-5%. Ngoko amanqatha ahamba amancinci, kwaye i-calcium inomdla.
Yintoni ebangela intlungu emilenzeni?
Ziya kuthinteka njani na?
Indlela yokukhulisa umntwana ngaphambi kokuzalwa kwakhe
Isaladi ukusuka kumanxweme
Izinzuzo kunye nokungalunganga kwama-multivitamines kunye namaminerali
Indlela yokulumka inja yabaphathi bamandulo?
I-Biography yomdlali we-actress u-Anna Snatkina
Iingcamango malunga nabafazi abakhulelweyo: sichaza amaphupha ngokuchanekileyo
Rubella kubantwana: iimpawu, unyango
Zithini iinduli ezintendeni, njengoko zibonisa umntu: izifundo zesundu
Indlela yokunyamekela ngokufanelekileyo ifenitshala ephakanyisiweyo?
6 iimpawu zokuthi umntu uyakuthanda